Hogaaminta Ugu Saraysa XDSHSI Oo uu Galabta Tababar Uga Furmay Hoolka Shirarka ee Kuliyada Maaraynta iyo Adeega Shacabka DDSI. - Cakaara News
Jigjiga(CN) Sidaad wararkayagii hore uga dheehateen waxaa Tababar socon doona mudo todobaad ah galabta looga furay hoolka shirarka ee kuliyada maaraynta iyo adeega shacabka DDSI tababar loogu tala galay in ay qaataan hogaaminta sare ee XDSHSI tababarkan ayaa ku qotoma sooyaalkii uu soo maray xisbigu gaar ahaan hirgalinta hawlaha horumarka, nabadgalyada, mamulka suuban, xidhiidhka dadwaynaha iyo waliba arimaha xisbiga.
Furitaanka Tababarka hogaaminta sare ee XDSHSI Galinkii danbe uga furmay Machadka Maareynta ayaa ay ka soo qaybgaleen masuuliyiinta ugu saraysa hogaaminta Xisbiga oo ay ka mid ahaayeen Gudoomiyaha Xisbiga mudane Maxamed Rashiid Isaaq,Madaxa Xarunta Dhexe mudane C/casiis Maxamed Cabdi,madaxwayne ku-xigeenka ahna wasiirka waxbarashada DDSI mudane mawliid haayir,Xubnaha Golaha Dhexe,Gudiga Dabagalka iyo Kormeerka iyo Masuuliyiin kale.
Xubnaha Golaha Dhexe iyo Gudiga Dabagalka iyo Baadhista Xisbiga ayaa loo Qaybiyay koox koox kuwaasoo la isugu xidhay nidaamka hogaaminta maamulka suuban ee Hal-ku Shan kuwaasoo afkaarahooda iyo talooyinkooda Qoraal hadba Qodobka laga doodayo ku soo gudbin doona.
Waxaana tababarkasi furitaankiisa ka hadlay gudoomiyaha XDSHSI ahna afhayeenka golaha baarlamaanka DDSI mudane maxamed rashiid isaaq wuxuuna ka warbixiyay ujeedooyinka iyo ahmiyada uu leeyahay tababarakani oo lagaga faaloon doono sooyaalkii uu soo maray Xisbiga iyo Guud ahaan Deegaanku siiba dhinacyada Horumarka,N/galyada, Maamulka suuban iyo Xidhiidhka.
Gudoomiyaha XDSHSI hadaladiisii ayaa Waxaa ka mid ahaa” sidaan wada ogsoonahay XDSHSI iyo dawlada uu hogaaminayo waxay halgan dheer kula jirtaa sidii deegaanka looga cibidh tirilahaa jahlinimada iyo saboolnimada ee mudada dheer ku soo habsatay shacabkeena, balse hadda xisbigu waxa uu dajistay barnaamijyo horurmarineed iyo mid dimuqoraadiyadeed taasi oo sanadihii ugu danbeeyay natiijooyin wax ku ool ah laga soo hooyay shacabkuna ku diirsadeen.
Haddaba si loo xoojiyo hawlahaasi waxaa lagama maar maan noqotay in hogaaminta sare mar walba la xoojiyo islamarkaana kor loo qaado tamartoda fulineed”Wuxuuna gudoomiyuhu kula dar daarmay hogaaminta sare in ay mudada uu socdo tababarkani kaalin mug leh ka qaataan si ay uga soo baxdo natiijooyin wax ku ool ah.
Tababarkan lagu lafaguri doono sooyaalkii iyo marxaladihii kala duduwanaa ee ay soo mareen XDSHSI iyo Xukuumada laga soo bilaabo sanadkii dhidibada loo aasay xukuumada DDSI sanadkii 1993 ilaa sanadkan 2007.T.T.I heerarkii ay soo mareen Horumarka,N/galyada,Maaulka saxartiran iyo Xdhiidhka ayaa socon doona ilaa todobaad.